Global Voices teny Malagasy » Ozbekistan: Fiampangana Heloka Bevava An’i Umida Akhmedova Mpaka Sary Fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Ozbekistan: Fiampangana Heloka Bevava An'i Umida Akhmedova Mpaka Sary Fanadihadiana
Voadika ny 01 Marsa 2018 13:53 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika Miranah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Ozbekistan, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Umida Akhmedova, sary avy amin'ny Fergana.ru
Voampanga ho nanevateva sy nanendrikendrika ny vahoaka sy ny fomban-drazana Ozbeka i Umida Akhmedova, mpaka sary fanadihadiana Ozbeka , araka ny tatitry ny Fergana.ru  [EN]. Ny sazy ambony indrindra ho an'ireo fiampangana ireo dia ahitana asa fanarenana mandritra ny roa hatramin'ny telo taona na fanagadrana mandritra ny enim-bolana.
Araka ny voalazan'i Umida Akhmedova, nilaza taminy ny kapiteny Nodir Akhmadzhanov, mpanadihady ao amin'ny sampan'ny polisy ao an-tanànan'i Tashkent  [EN], fa ireo mpanoratra rehetra eo an-toerana izay niara-niasa tamin'ny Fandaharan'asan'ny Masoivoho Soisa momba ny Vehivavy no niantefan'ny fitoriana heloka bevava. Voampanga tamin'ny famoahana ny raki-tsary  “Vehivavy sy Lehilahy: manomboka mangiran-dratsy ka hatramin'ny masoandro mody” , novokarina tamin'ny taona 2007 teo ambany fanohanan'ny Fandaharan'asan'ny Masoivoho Soisa momba ny Vehivavy i Akhmedova, araka ny nosoratan'ny Fergana.ru. Tsy misy ny fanazavana momba ireo mpanoratra hafa izay nametrahana ny fitoriana. Manohy manazava ny tranonkala:
Umida Akhmedova shared first time she was called by police on November 17. Captain Nodir Akhmadzhanov invited her to Mirabad RDIA to give the report of witness on her “Women and men: from dawn to dusk” album. The investigator interviewed Umida for two hours and asked questions, related to Akhmedova’s participation in the production of photo album and as such movies as “Men and women: rites and ritual” and “The burden of virginity”  EN] (Torrent can be downloaded here  [RU]).
Nanazava tamin'i Umida Akhmedova ny mpanadihady fa ny raharaha fitoriana azy dia novolavolaina sy mifototra amin'ny fehin-kevitry ny manam-pahaizana ao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna any Tashkent, manamarika fa “fanevatevana sy fanendrikendrehana ny vahoaka Ozbeka” ny raki-tsary. Mandritra izany, tsy dia mazava loatra izay sary (tsy ny sary namboarina, tsy ny endriky ny efi-jery) lazaina fa “fanendrikendrehana” na “fanevatevana”. Tsy mazava ihany koa hoe iza ary oviana ny sampana Ozbeka misahana ny gazety sy ny fampahalalam-baovao, ny rafi-panjakana, no nisolotena ilay voninahitry ny vahoaka Ozbeka voahosihosy.
Nilaza i Omida Akhmedova fa sambany izy no nantsoin'ny polisy tamin'ny 17 Novambra. Nanasa azy tao amin'ny Mirabad RDIA ny kapiteny Nodir Akhmadzhanov mba hanome tatitra vavolombelona mikasika ny raki-tsariny “Vehivavy sy lehilahy: mangiran-dratsy ka hatramin'ny masoandro mody”. Nanadihady an'i Umida nandritra ny adiny roa ny mpanadihady ary nametraka fanontaniana, mifandraika amin'ny fandraisana anjaran'i Akhmedova tamin'ny famokarana ny raki-tsary sy ny horonantsary toy ny “lehilahy sy vehivavy: fombam-pivavahana sy fombafomba” ary ny “ny enta-mavesatry virijiny ” ( Azo trohana ato ny Torrent).
Naneho hevitra tamin'ny famoahana fanangonan-tsonia ho fiarovana an'i Akhmedova  ny Fiarahamonina Iraisam-pirenen'ireo mpaka sary sy mpanakanto. Tao amin'ny taratasy fanangonan-tsonia iray, naneho fanatafintohinana faratampony tamin'ny fiampangana ny taratasy “Fanoherana sy Fahatezerana” an'ny Fikambanana Iraisampirenen'ny Mpanao Gazety ao “Kaokazia” .
Ny tantara manontolo dia ohatra iray amin'ny hamaizinan-tsaina sy ny fihemoran'ny fenitra demaokratika, izay diso derain'ny governemanta Ozbekistana loatra amin'ny teny fotsiny. Fantatr’ izao tontolo izao fa ny programan’ ny masoivoho Soisa dia tetikasa fanampiana ara-tsosialy, fanabeazana ary fanentanana. Ilaina ny manantitrantitra fa iray amin'ireo mpanoratra izay niara-niasa tamin'ny Programa tato ho ato i Umida Akhmedova. Nandray anjara tamin'ny programa sy tetikasa iraisam-pirenena maromaro ihany koa izy. Izahay, mpiara-miasa aminy dia mahafantatra fa tsy mpanoratra mana-talenta ihany i Omida fa tena tia tanindrazana koa. Noho ny asan'i Umida, nahafantatra momba an'i Ozbekistan ny olona maro manerantany ary tia ity firenena ity.
Hatramin'izao, manodidina ny 400 ny sonia voahangona avy amin'ny firenena am-polony. Tonga hatrao amin'ny tontolon'ny bilaogy miteny Rosiana tamin'ny 17 Desambra ny vaovao momba ny fiampangana heloka bevava hanenjehana an'i Akhmedova, raha toa ka tsy voatantara loatra amin'ny fampahalalam-baovao miteny Anglisy ny zava-misy.
Nilaza  ilay mpisera Lj vaskodagala fa tena afaka manampy olona ny fanentanana fiarovana toy izao ary mangataka amin'ny rehetra izy mba hanasonia ny fangatahana. Fanentanana hamoahana an'i Umida Niyazova any am-ponja sy ivelan'ny firenena no fanentanana farany (Azo jerena ato  ny fitantarana momba ny fanentanana). Nanambara i Vaskodagala fa mahafantatra manokana an'i Akhmedova izy ary tsy mety mino fa miharatsy tahaka izany ny toe-javatra:
Saingy nihevitra aho fa tsy hitranga amin'i Umida izany – afaka mampihomehy ny rehetra izy, Tompo ô! inona no mety hiampangana azy? Izany koa no noeritreretiko. Saingy tsy izao. Niandry iray volana izahay – hoy izy: ‘andraso, angamba ho tony izy ireo’. Saika nitovy tamin'ny tantaranay tany Kirghizistan herintaona lasa izay izany – saingy nahavita nandamina ny zava-drehetra izahay. Saingy tsy amin'izao fotoana izao – novaina toerana tsy ho vavolombelona fa lasa voampanga i Umida. Ary noteren-dry zareo ny faribolana – izay tsy misy fototra velively. Hitanareo, nanatsatso ny fomban-drazam-pirenen'izy ireo izy.
Ny fanangonan-tsonia dia azo soniavana ato .
Bilaogera marobe miresaka momba ny raharahan'i Akhmedova no manontany tena hoe ahoana no ahafahan'ny mpaka sary fanadihadiana manala baraka ny vahoakany sy ny fomban-drazany manokana amin'ny alalan'ny fanaovana sary. Ankoatra izany, tena tsy misy fotony, fa voampanga ho manao hosoka ny olona iray izay raha ny marina, dia mandrakitra momba ny fiainana.
Manohina sy tsy dia mahazatra ny sarin'i Akhmedova. Mampiseho tsara ny fiainana andavanandron'ny fiarahamonina Ozbeka ireo sary. Ireto ny roa amin'izy ireo.
Ankizy Ozbeka mipetraka anaty siny, sary avy amin'i Umida Ahmedova. Tao amin'ny Fergana.ru.
Ankizivavy eo ambaravarakely, sary avy amin'i Umida Akhmedova, tao amin'ny Fergana.ru.
Maro ireo sary mbola azo jerena ao amin'ny Fergana.ru  [RU]
Mombamomba an'i Umida Akhmedova (araka ny voalazan'ny UZSCI )
Teraka tamin'ny 21.10.1955 tao Parkent  [RU], Ozbekistan
1977 – 1981 – Nianatra tao amin'ny Kolejin'ny Fiarahamonina, tanànan'i Vladimir, Rosia
1981 – 1986 – Nianatra tao amin'ny Oniversitem-panjakana Rosiana Rehetra momba ny sinema sy sary , Moskoa, Rosia
1970 – 1990 – mpandrindra tao amin'ny Uzbek Newsreel
2000 – hatramin'izao – mpikambana ao amin'ny sendikàn'ny famoronana an'ny Akademian'ny Zavakanto
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/01/115364/
 araka ny tatitry ny Fergana.ru: http://enews.ferghana.ru/article.php?id=2597
 “The burden of virginity”: http://enews.ferghana.ru/article.php?id=2512
 fanangonan-tsonia ho fiarovana an'i Akhmedova: http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=ru|en&sl=en&tl=en&u=http://caucasia.at.ua/news/bit_vo_vse_kolokola/2009-12-17-109
 Oniversitem-panjakana Rosiana Rehetra momba ny sinema sy sary: http://en.wikipedia.org/wiki/Gerasimov_Institute_of_Cinematography